सप्तरीमा हत्या आरोपमा श्रीमती र छोरा पक्राउ | News Madhesh
सप्तरीमा हत्या आरोपमा श्रीमती र छोरा पक्राउ
राजविराज । सप्तरीमा हत्या आरोपमा पत्नी र छोरा मंगलबार पक्राउ परेका छन् । कुटपिटबाट मृत्यु पश्चात् फरार सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका १ पकरीकी ५० वर्षीया जमुनी खातुन र उनका छोरा २३ वर्षीय नइम पमरिया पक्राउ परेका हुन् ।
आइतबार राति मदिरा सेवन गरेका नइम र जमुनीको कुटपिटबाट ६२ वर्षीय मो. गफुर पमरियाको मृत्यु भएको बताइएको छ। गफुरलाई उनकै श्रीमती जमुनी र कान्छा छोरा नइमले कुटपिट गरी हत्या गरेको भन्दै मृतकका भाइ मो. इसराइल पमरियाले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए।
स्थानीय जिवछ पमरियाका अनुसार झगडालु स्वभावका नइमकै कारण उनकी पत्नी लेल्ही खातुन एक साता अघि र भाउजु चाँदनी खातुन चार महिनादेखि माइत विस्थापित छन् ।
आरोपितलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान कार्य शुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारतीले जानकारी दिए।
प्रकशित मिति : 2019-10-09